यौन विचलन - Younka Kura
written by YounKaKura February 12, 2018
मानिसले पारिवारिक जीवनयापन गरेर घरजम गर्न थालेदेखि नै यौनसम्पर्कले सहवासको रूप धारण गरेको हो । सामान्य यौनसम्पर्क र सहवासमा शाब्दिकमात्र होइन तात्विक फरक पनि छ । यौनसम्पर्क एउटा जैविक कर्म हो । सबै जीवमा अर्को पुस्ता पैदा गर्न यौनसम्पर्क राख्ने क्षमता विकसित हुनु सृष्टिको आवश्यकता हो । त्यस्तो यौनसम्पर्कको प्रक्रिया भने जीवकोे जात र विकासको क्रमअनुसार फरक हुन्छ । सहवास सृष्टिको सर्वश्रेष्ठ जीव मानिसको अर्को पुस्ता जन्माउने जरुरत पूरा गर्ने माध्यममात्र नभएर जोडीहरू सहअस्तित्वमा बसेर एकअर्काका गुणहरूको समन्वयका माध्यमबाट रसपूर्ण पारिवारिक जीवन व्यतीत गर्न ऊर्जा दिने प्रक्रिया हो । त्यसैले सहवासमा दुवै पक्षका आवश्यकता र सहजताको उच्चतम कदर हुनैपर्दछ । स्वस्थ सहवासका लागि स्वस्थ यौन मनःस्थिति र स्वस्थ यौन व्यवहार दुवै उत्तिकै आवश्यक हुन्छन् ।
यौन सबैको अनिवार्य आवश्यकता हो । यौन सम्बन्ध राख्ता अँगालिने विधिहरू हरेक जोडीमा फरक हुन सक्तछन् । हरेक व्यक्तिको यौन इच्छा फरकफरक हुन्छ । स्वस्थ यौन व्यवहार भत्राले संलग्न जोडीले आपसमा स्वीकृत विधि र व्यक्तिबाट यौन व्रिmयाकलापको आनन्द अनुभूत गरेको अवस्थालाई बुझिन्छ । स्वस्थ यौन मनःस्थिति भत्राले कुनै एक जनालाई आफूलाई यौन क्रियाकलाप गर्न दबाब दिएको अनुभूति हुनु हुँदैन । एकअर्कामा कुनै एक जनाले पनि आपूmलाई इच्छा नहुँदा इच्छा नभएको कुरा व्यक्त गर्ने अधिकार दिँदै त्यस्तो भावनाको सम्मान गरिनुपर्दछ । इच्छाविरुद्ध भएको भए पतिपत्नीबीतको सम्भोग पनि बलात्कार हुन्छ भत्रे नजिर विभित्र देशका न्यायपालिकाहरूले स्थापना गरिसकेका छन् । यौनसम्पर्कपछि पनि एकअर्काप्रति सम्मान कायम हुनुपर्दछ र कसैलाई पनि सम्मान गिरेको महसुस हुनु हुँदैन । यौन इच्छा तथा यौन क्रियाकलापका बारेमा खुलेर एकअर्कासँग कुरा गर्ने वातावरण हुनुपर्दछ । दुवैले यौनसम्पर्कअगि एकअर्काको शरीर र भावना बुझ्नुपर्दछ । यो नै स्वस्थ यौनसम्बन्ध हो ।
स्वस्थ यौन व्यवहार र स्वस्थ यौन मनःस्थितिविना कायम हुने कुनै पनि यौन क्रियाकलाप यौन विचलन हो । मानिसमा यौन विचलन देखिनुका विभित्र कारण हुन्छन् । यौन विचलन बलात्कार, यौन शोषण, यौन दुव्र्यवहार र पीडाजनक यौन व्यवहारका रूपमा प्रस्तुत हुन सक्तछ ।
उदाहरणका लागि कसैले केटाकेटी उमेरमा आफूद्वारा सम्मानित व्यक्तिले यौनसम्बन्ध राखिरहेको देखेको छ भने त्यस विषयमा आफ्नै किसिमको धारणा बनाएको हुन्छ । पटकपटक त्यही कुरा अर्थात् यौनसम्पर्कको दृश्य मस्तिष्कमा आउँदा ऊ त्यसको खोजीमा तल्लीन रहन्छ अनि किशोर अवस्था हुँदै युवा उमेरमा आइपुग्दा उसले धेरै अगाडि मस्तिष्कमा सेट गरेको त्यही यौन व्यवहारको स्वाद खोज्न फरक किसिमको शैली अँगाल्दछ । स्मरणमा रहेको त्यो यौन व्यवहारमा उनीहरू सन्तुष्ट रहेजस्तै आफू पनि सन्तुष्ट रहने चाहनाले उसले फरकफरक व्यक्तिसँग सम्बन्ध राख्तछ । बाल्यावस्थामै यो समस्यामा रहेको व्यक्तिले नैतिकताको ख्याल गर्दैन ।
यौन मनोविज्ञानको अध्ययनको क्षेत्र बृहत् र विस्तारित छ । यसले मानवीय सम्बन्धको विकासमा यौनका सकारात्मक प्रभावहरूको मात्रै अध्ययन गर्दैन, बरु यौनका कारणबाट मानवीय सम्बन्धको विकास र संवद्र्धनमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावहरूको पनि अध्ययन गर्दछ । यौन विचलन भत्रे शब्दले त्यस्ता अस्वाभाविक यौन मनःस्थिति र भौतिक क्रियाकलापतर्फ इङ्गित गर्दछ जसले पारस्परिक मानवीय सम्बन्धहरूको विकास र संरक्षणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ ।
यस्ता सबै यौन मनःस्थितिको र ती मनःस्थितिले उत्पत्र गर्न सक्ने भौतिक क्रियाकलापको अध्ययन गर्न यौन मनोवैज्ञानिकहरूले विभित्र साधनहरू प्रयोग गर्ने गर्दछन् । यसमा मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यावहारिक आदि महत्वपूर्ण छन् । यौन समस्याहरूको अध्ययन र उपचार गर्ने क्रममा मानिसका यौन व्यवहारमा देखिने विचलन सबैभन्दा हाँकपूर्ण विषयमध्ये एउटा हो । कहाँसम्म यौन व्यवहारमा नयाँ प्रयोग मात्रे र कहाँदेखि त्यस्तो व्यवहारलाई विचलन मात्रे भत्रे कुराको सीमा तोक्ने काम अत्यन्त अप्ठ्यारो हुन्छ । यथार्थमा यस्तो सिमाना कोर्दा मानिसको यौन व्यवहारको प्रकृतिभन्दा त्यो व्यवहार गर्दाको उसको मानसिक अवस्थाको अध्ययन बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । सरल शब्दमा भत्रे हो भने यस्तो कर्मको रूपभन्दा त्यसको नियत हेर्नु बढी जरुरी हुन्छ ।
मानसिक असन्तुलनको एउटा रूप “बाई पोलार डिसअर्डर” अथवा “म्यानिक डिप्रेसिभ साइकोसिस” पनि हो । यस्तो अवस्थामा मानिस कहिले वातावरण र परिस्थिति अनुरूपभन्दा अति खुसी र आह्लादित भएको हुन्छ भने कहिले ऊ स्वाभाविकभन्दा बढी निराश र दिक्दारीको अवस्थामा देखिन्छ । यस्तो अवस्था बारम्बार एकपछि अर्को गरेर उसको मनःस्थितिलाई आक्रान्त पार्न सफल हुन्छ, तर ऊ आफ्नो यो मानसिक अवस्थामाथि आफैँ नियन्त्रण गर्न नसक्ने गरी विवश हुन्छ । वातावरणको स्वाभाविकतामाथि आफ्नो नियन्त्रण हराउन पुगेको यस्तो मान्छेले आफ्नो स्वाभाविक यौनजीवनमाथि पनि आफ्नो नियन्त्रण गुमाउँदछ । “म्यनियाक” अवस्थाबाट गुज्रिरहेका वेला उसको यौन चाहना अनियन्त्रित उन्मादजस्तो हुन्छ भने “डिप्रेसिभ” अवस्थाबाट गुज्रिरहेका वेला उसको सामान्य यौन चाहना र उत्तेजनाको अनुभूति गर्ने क्षमता पनि हराउँदछ ।
विश्वविख्यात मनोचिकित्सक सिग्मन्ड फ्रायड इड, इगो र सुपर इगोबीचको असन्तुलन यौन विचलनको प्रमुख कारण मान्दछन् । यसको सरल व्याख्या गर्दा मानिसका असीमित यौन चाहना र स्वीकृत यौन व्यवहारबीचको फरकका कारणले आफैँभित्रबाट हुने नियन्त्रणको असर अर्थात् आकाङ्क्षा र सीमाबीचको द्वन्द्वले जन्माउने डर, चिन्ता, लाज र हीनताबोधले उसलाई आफ्नै नजरमा गिराउँदछ जसको फलस्वरूप यौन विचलनले जन्म लिन सक्तछ ।
फ्रायडकै अर्को एक सिद्धान्त “लिबिडो थ्योरी” जन्मेपछि बच्चाका आनन्द प्राप्तिका सबै स्रोतहरू यौन ऊर्जासँग गाँसिएका हुन्छन् जसको प्रतिच्छाया मस्तिष्कमा हुन्छ भत्रे विचारबाट प्रभावित छ । यसअनुसार बच्चा जन्मेपछि पहिलो अठार महिना उसको आनन्दको ऊर्जाप्राप्तिको केन्द्र मुखमा हुन्छ जहाँबाट उसले दूध चुस्तछ । एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मको उमेरमा त्यस ऊर्जाको केन्द्र मलत्याग गर्ने र रोक्ने कुरासँग सम्बद्ध हुन्छ र त्यो केन्द्र मलद्वारमा सर्दछ । तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म आनन्द अर्थात् उन्मादको केन्द्र पिसाब फेर्ने कुरामा उसको नियन्त्रणका कारणले जनेन्द्रियमा सर्दछ । पाँच वर्षदेखि किशोर अवस्थाबीचको सुषुप्त अवस्थाबाहेक पुरुषमा यो केन्द्र त्यसपछि सधैँ लिङ्गमै रहन्छ । तर स्त्रीमा यो पहिले भगनास र पछि योनिमा सर्दछ । केही गरी बीचको सुुषुप्त अर्थात् दमित अवस्थापछि किशोर अवस्थामा यो केन्द्र पुनः जागृत भएन भने यौन विचलन देखिन सक्तछ ।
फ्रायडद्धारा प्रतिपादित केही सिद्धान्तहरू पछि आलोचित भए । उनकै चेला कार्ल गुस्ताभ जङले यौन मनोविज्ञान र मनःस्थितिको ऊर्जाको केन्द्र आध्यात्मिक र अवचेतन मस्तिष्कलाई माने र अर्को सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । जुङले ‘पर्सोना’ अर्थात् श्रुति, समाज, नैतिकता, शास्त्र र शिक्षा आदिबाट मानिसको मस्तिष्कमा बनेको उत्कृष्ट व्यक्तिको रूप र अवचेतन मस्तिष्कमा रहेको यथार्थ रूपबीचको द्वन्द्वपछि अवचेतन बाहिर प्रकट भयो भने यौन विचलन आउन सक्तछ भने । उनका अनुसार प्रत्येक पुरुषको अवचेतनमा नारी गुण हुन्छ र प्रत्येक नारीको अवचेतनमा पुरुष गुण हुन्छ । यसलाई उनले व्रmमशः ‘अनिमा’ र ‘अनिमस’ भनेका छन् ।
जोन मनीद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त “लभ म्याप थ्योरी” अनुसार किशोर अवस्था यौन र प्रेमको मार्गचित्र निर्माणको अभ्यास हुने महत्वपूर्ण अवस्था हो । यतिखेर कुनै अप्रिय यौन व्यवहार, यौन शोषण वा यौन इच्छामा दमन भयो भने त्यसले पैदा गरेको कुरूप मार्गचित्र मस्तिष्क र भावनामा बस्न पुग्दछ जसका कारणले गर्दा शारीरिक चाहना र मानसिक सोचका बीचमा द्वन्द्व उत्पत्र हुन सक्तछ । यसका कारणले त्यो व्यक्ति ः
(१) भावनात्मक प्रेमरहित तर शारीरिक भोगको भोकले भरिएको हुन सक्तछ (हाइपरफिलिया);
(२) यौन चाहना र यौन आकर्षण हराएर भावनात्मक प्रेममात्र गर्ने हुन सक्तछ (हाइपोफिलिया); र
(३) शारीरिक भोक पनि भएको, भावनात्मक प्रेम पनि भएको तर एउटै व्यक्तिसँग वा एउटै सन्दर्भमा दुवैलाई एकैपटक प्रस्तुत गर्न नसक्ने हुन सक्तछ । (प्याराफिलिया)
यस्तो बिग्रिएको मनःस्थितिका व्यक्तिहरू नै धेरैजसो यौन विचलन, यौन अपराध वा यौन दुव्र्यवहारका लागि जिम्मेवार हुन्छन् । स्कटिस लेखक रबर्ट लुई स्टिभेन्सनद्वारा लिखित “डा. जेकिल एन्ड मिस्टर हाइड” नामक पुस्तकमा एउटै व्यक्तिका दुई थरी व्यक्तित्वहरू सक्रिय रहेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसमा मिस्टर हाइड हत्यारा तथा परपीडक हुन्छ भने अर्को कतिसम्म सरल व्यवहारको धनी हुन्छ भने उसले आफ्नी पत्नीप्रतिको प्रेमका कारणले उनको कुमारीत्व पनि भङ्ग गर्दैन । यो प्याराफिलियाको गतिलो उदाहरण हो ।
गर्डन अलापोर्टद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार व्यक्तिहरूको व्यक्तित्वको समायोजित विकास जन्मदेखि किशोर अवस्थासम्म विभित्र चरणमा हुन्छ । कुनै चरण अवरुद्ध भए उसको समग्र व्यक्तित्व स्वस्थ हुँदैन र ऊ यौन विचलनको सिकार हुन सक्तछ ।
लेखक: डा.सुबोधकुमार पोखरेल
(बरिष्ठ यौन तथा प्रजनन बिशेषज्ञ)
मलाई शारीरिक सम्पर्कमा निकै डर लाग्छ
युवतीको यौनांगको सफाई
किन हुन्छ स्वप्नदोष ? “Nightfall”